हातखुट्टा मर्किए के गर्ने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
हातखुट्टा मर्किए के गर्ने?
सोमबार, असार २३, २०७६, ०६:१०:००
प्रश्न: हातखुट्टा मर्किनु भनेको कस्तो समस्या हो? मर्किने समस्या हुँदा के के हुन्छ? के के सावधानी अपनाउन सकिन्छ? - जेपी
डा सजु प्रधानको उत्तर :
मर्कनु एउटा दुर्घटनाबाट सृजना हुने शारिरीक समस्या हो। जोर्नीहरूको वरिपरि डोरीजस्तो तन्तुहरु हुन्छन् जसलाई लिगामेन्ट भनिन्छ। लिगामेन्टसले जार्नीलाई कस्सिएर एउटा बन्धनमा सुरक्षित राखेका हुन्छन्। जोर्नीका यीनै लिगामेन्टस् बटारिएर उत्पन्न हुने समस्या र चोटपटकलाई मर्कने भनिन्छ।
सामान्य अवस्थामा मर्कने भनेको व्यक्तिको क्षणीक लापरवाहिका कारणले हुने समस्या हो। यो कुनै व्यक्ति लडेर वा नलडिकन पनि जोर्नीहरु मर्कन सक्छन्। प्राय हातखुट्टा र हिप बढी मर्कने अंग हुन। कहिलेकाहीँ मर्कदा टिस्यु समेत ड्यामेज हुने तथा चुँडिन, च्यातिन वा तानिन सक्छन्। टिस्यु ड्यामेज भएको ठाँउमा रक्तश्राब हुन्छ र सुन्निन गई दुखाई बढी हुने गर्दछ।
सामान्य मर्काइले कुनै असर गर्दैन। यो सामान्यतयाः १ देखि ६ हप्तामा उपचार नगरे पनि आफँै ठीक भएर जान्छ। मर्काइ पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। ग्रेड एक भनेको एउटा सामान्य अवस्था हो। ग्रेड दुईमा लिगामेन्टस्को केही अंश मात्र चुँडिने हुन्छ भने ग्रेड तीनमा पुरै च्यातिने हुन्छ। लिगामेन्टस् च्यातियो भने शल्यक्रिया गरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेड एक र दुईको उपचार शल्यक्रिया बिनानै गरिन्छ। मर्केर सुन्निएको छ भने आइसले सेकेर सुन्निने र दुखाई कम गर्न सकिन्छ। कहिले काहीँ बढी सुन्नियो भने चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गर्नुपर्छ।
मर्काइमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेड एक र दुईलाई सामान्य रुपमा क्रेप व्यान्डेज गर्ने, आराम गर्ने, बैसाखी लिएर मात्र हिड्ने गर्नु पर्दछ भने ग्रेड तीनमा जोर्नी फुस्कने गरी मर्केको छ भने शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म उपचारपछि पनि ठिक भएन भने फिजियोथेरापी मार्फत पनि उपचार गर्न सकिन्छ। मर्काइमा चिकित्सकसको सल्लाह लिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ।
मर्काइमा जर्बजस्ती हिँड्ने गर्नुहुँदैन। जर्बजस्ती गर्नाले गोलीगाँठाहरु फुट्न सक्छन्। कसै कसैले मर्कने बित्तिकै जोडले माँड्ने, तन्काउने गर्दछन् तर यस्तो गर्नु हुदैन। मर्केपछि हड्डि भाँचिएको छ कि छैन पत्ता लगाउन एक्सरे गर्नुपर्छ। मर्कने समस्यालाई धेरै व्यक्तिले ठूलो समस्याको रुपमा हेरेको पाइदैन। कतिपय अवस्थामा मर्काइले जटिल समस्या समेत सृजना गर्न सक्छ।